Dhageyso:Tiro Xildhibaano ah oo ku bahoobey Dalada Hiilo Dastuur & Dimoqraadiyad oo taageeray mowqifka Ra’iisul Wasaare Saacid – idalenews.com
Dhageyso:Tiro Xildhibaano ah oo ku bahoobey Dalada Hiilo Dastuur & Dimoqraadiyad oo taageeray mowqifka Ra’iisul Wasaare Saacid
In ka badan 100 xildhibaan oo ku bahoobay dalad laga magacaabo Hiil Dastuur iyo Dimquraadiyadeed ayaa kulan qado sharaf ah oo ay isugu yimaadeen waxay is tusaaleeyeen jaahwareerka siyaasasdeed ee uu abuuray mooshinka lagu ridaayo xukuumadda ee baarlamaanka loo gudbiyay. Waxayna tilmaameen in Mooshinku marin habaabinaayo masiirka ummadda uuna hakad galinayo habsami u socodkii hawlaha dawladda.
Shirkaan oo ahaa midkii labaad muddo todobaad gudihiis ah oo ay yeeshaan xildhibaanada Hiil Dastuur iyo Demquraadiyad, ayay xil-dhibaanadu ku muujiyeen baahida loo qabo hagaajinta iyo ka talo bixinta ummadda aayatiinkeeda. Waxayna sheegeen inaysan ka ogolaan doonin cidii isku dayda inay carqalad galiso ama dib u celiso masiirka wanaagsan iyo horusocodka ummadda Soomaaliyeed.
Xildhibaanadaan ayaa ku tilmaamay in mooshinka hadda horyaala baarlamaanka uu yahay mid hor istaagaya howlihii ay xukuumadu waday, wuxuuna carqalad ku yahay wax ka qabashada masiibooyinkii ay gaystay duufaantii ku dhufatay gobolada Puntland, Fataahada Wabiga Shabeele oo khasaaro xoogan u gaystay deegaamo ku yaala shabeelada hoose, iyo xalinta colaadihii soo noq noqday ee ka dhacayey gobolada shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose.
Gabagabadii kulanka ayaa xildhbaanadu baaq u direen shacabka Soomaaliyeed ee jecel dowladnimada inay ka dhiidhiyaan mooshinka la rabo in lagu rido xukuumada oo laga leeyahay dano siyaasadeed, taas oo ay wataan shakhsiyaad aan doonayn dowladnimada, sidoo kale waxay ugu baaqeen beesha caalamka in aysan indhaha ka qarsan kuwa ka shaqaynaya dib u celinta horumarka dalka iyo dadka.
Dhageyso Xildhibaan C/ladiif Muuse Sanyare oo sheegay in ay been abuur tahay in la hayste u yihiin madaxda khilaafka ka dhaxeeyo
Muqdisho: Garaash lagu iibiyo baabuurta raaxada oo dab qabsadey, qasaaro maaliyeedna sababey